Xhosa Need Help Archives - APRAV
Ingaba wena okanye umntu omaziyo ukhe wabakwingozi endleleni, kwaye ufuna ukwenza ibango elitsha lwentlawulo-mali kwi ngxowa mali yengozi zendlela (RAF).
1st Feb 2020 /in Xhosa Need Help /by Julie Rosenbaum
Sicela usiphe ezinkcukacha zilandelayo:
Amagama akho apheleleyo
Inombolo yakho yesazisi
Umhla ekwenzeke ngayo ingozi
Uthi gqaba – gqaba ukuba wenzakale njani
Kutheni u APRAV ekucebisa ukuba usebenzise amagqwetha anamava?
Igqwetha lizokuncedisana nawe ukuba isicelo sakho sentlawulo sibe luqilima, ukwenzela ukuba ufumane intlawulo ekufaneleyo. Igqwetha lizakwenzela oku kulandelayo:
Lizakuphonononga lijonge ukuba kufanelekile na ukuba ufake ibango.
Lizakuncedisana nawe ukwenza isicelo, likuncede kwingxaki ozakujongana nazo
Lifune iinkucukacha zengozi emapoliseni, nengxelo zonyango zika gqirha/isibhedlele
Lithetha – thethane nabakwa RAF ukulungiselela wena (likuyele nasenkundleni yamatyala)
Ingaba unexhala lokuba uzakuyifumana phi imali yokubhatala igqwetha? Sikhona isisombululo, amagqwetha ethu asebenza ngendlela yokuba; ukuba likhatyiwe ibango lakho, awulibhatali igqwetha. Kwaye akukho mali uyibhatalayo lingekasebenzi igqwetha.
Sizakuqinisekisa ukuba ufumana lonke uncedo oludinganyo. Ungaqhagamshelana nathi ngokusithumelela:
Umyalezo ocela sikuthinte ku 063 393 3719
Umyalezo ka watsup ku 063 393 3719
Uthumele umyalezo we – email
Omnye wabasebenzi bethu uzakuqhagamshelana nawe kamsinyane.
https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png 0 0 Julie Rosenbaum https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png Julie Rosenbaum2020-02-01 10:48:352020-09-17 08:45:26Ingaba wena okanye umntu omaziyo ukhe wabakwingozi endleleni, kwaye ufuna ukwenza ibango elitsha lwentlawulo-mali kwi ngxowa mali yengozi zendlela (RAF).
Uzifakele ngokwakho ibango lwemali kwi ngxowa mali yengozi zendlela (RAF), kodwa awukayifumani imali okanye imali oyifumeneyo ayikuxolisi!
Abakwa RAF baye babhengeza ukuba abantu abafumene iingozi endleleni mabazenzele ngokwabo amabango emali, ngaphandle kokufuna uncedo lwamagqwetha. Bathembisa ukuba lenkqubo yeyona ilula nekhawulezayo, kwaye incedisana nabantu ukuba bangachithi mali, ngelishwa oku akwenzeki.
Inyaniso yona yeyokuba amabango amaninzi ayekwa engabhatalwanga, ade aphelelwe lixesha. Abantu abaninzi bhatalwa imali enganelisiyo engekho semthethweni (babhatalwa kancinci okanye zikhatywe izicelo zabo).
U APRAV ufumana iminxeba veki zonke evela ebantwini nechaza ukuba izicelo zabo zikhatyiwe ngokungekho semthethweni, abanye babhatalwe imali engaphelelanga okanye abahoywa.
Sidinga ukuba usithumelele ezinkcukacha zilandelayo:
Kutheni u Aprav ecebisa ukuba ufune uncedo lwegqwetha elinamava? Kungokuba:
Igqwetha lizokujongela ukuba unalo na ibango kwa RAF
Lincedisane nawe ukwenza isicelo mali, lincedisane nawekwingxaki ozkujongana nazo
Lifumane ingxelo yamapolisa, nengxelo zomonzakalo nezonyango zikagqirha
Lithetha-thethane no RAF, (likuyele nasenkundleni yamatyala)
Ingaba unexhala lokuba uzakuyifumana phi imali yokubhatala igqwetha? Sikhona isisombululo, amagqwetha ethu asebenza ngendlela yokuba ukuba likhatyiwe ibango lakho, awulibhatali igqwetha. Kwaye akukho mali uyibhatalayo lingekasebenzi igqwetha
https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png 0 0 Julie Rosenbaum https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png Julie Rosenbaum2020-02-01 10:16:372020-02-24 11:52:50Uzifakele ngokwakho ibango lwemali kwi ngxowa mali yengozi zendlela (RAF), kodwa awukayifumani imali okanye imali oyifumeneyo ayikuxolisi!
Yintoni lo APRAV, kwaye singakunceda njani?
U APRAV lo yinkampani esebenza ngokukhusela amaxhoba engozi zendlela, kwaye yinkampani engajonganga nzuzo (NPO), injongo yale nkampani kuku khusela amalungelo amaxhoba ase Mzantsi Afrika, athe agaxeleka kwingozi ezimasikizi ezindleleni zethu.
U APRAV akenzi bango lwemali kwa RAF, umsebezi wethu kukuqinesika ukuba:
Amaxhoba engozi zendlela ayazi ngamalungelo awo asemthethweni.
Amaxhoba afumana uncedo nenkxaso ayidingayo, kude kugqitywe isicelo sawo.
Abakwa RAF balandela umthetho nomgaqo abamiselwe wona, ukuze amaxhoba afumane imali yawo ngokwanelisekileyo kwintsuku ezikwikhulu elinamashumi amabini.
Onke amasebe achaphazelekayo kweli bango anyanzelekile ngokwasemthethweni ukuba enze umsebenzi wawo ngokufanelekileyo, ukuze kubhataleke imali yamaxhoba.
uRhulumente ufezekisa u Mthetho Womgaqo Wesizwe ukukhusela onke amaxhoba engozi zendlela, ukuze kuhlonitshwe, kukhuselwe kwaye kubekho ukhuseleko ezindleleni zethu.
U APRAV usebenza nalamasebe alandelayo:
Amaxhoba engozi zendlela kunye nentsapho zawo
Ababhatali berhafu kunye nabahlali jikelele
Isebe lamaxhoba engozi zendlela (RAF)
Amasebe aseburhulumenteni achaphazelekayo
Onke amasebe abonisa umdla ekukhuseleni amalungelo abantu
Amasebe obumbano asemthethweni (aquka amagqwetha, ogqirha, abami bamafa, njalo-njalo)
uRhulumente welizwe lomzantsi Afrika, imibutho yezo politiko
https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png 0 0 Julie Rosenbaum https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png Julie Rosenbaum2020-02-01 10:16:222020-02-24 11:54:39Yintoni lo APRAV, kwaye singakunceda njani?
Ndifuna ukwazi ngcono ngo RAF kunye namalungelo am emva kokugaxeleka kwingozi yemoto
Yintoni u RAF?
U RAF lisebe lika Rhulumente elijongene nezicelo zemali zamaxhoba engozi zendlela,
elisebe imali liyifumana kubantu belizwe lase Mzantsi Afrika xa bethe batha inqwelo
mafutha zabo. Injongo ka RAF kukubuyekeza/ukubhatala amaxhoba engozi zendlela
okanye amalungu alowo uthe wasweleka ngenxa yengozi. URAF unengxowa mali
eqinisekisa ukuba amaxhoba ayabhataleka, ukuze angaxhamleki ngokufuna
imbuyekezo kubaqhubi abangenankathalo.
Ngubani ekufanekele ukuba enze ibango?
Lixhoba elenzakeleyo (ngaphandle kokuba kufumaniseke ukuba ibinguye yedwa lo 100%, ungunobangela wengozi)
Umntu onelungelo obexhomekeke kwixhoba eli liswelekileyo (ngaphandle kokuba lo uswelekileyo kunesiqinisekiso 100%, ukuba ungunobangela wengozi)
Isizalwane salowo uswelekileyo elithe labhatala iindleko zomngcwabo
Umzali okanye umntu osemthethweni ojonge umntana obesengozini
Umzali oselungelweni ngokubekwa ngonontlalontle, obhatale iindleko zonyango
Umntu obekiweyo ngokusemthethweni ukuba ajonge ilifa lalowo uswelekileyo
Zintoni ekufanele ukuba kwenziwa ibango kuzo?
Indleko esezibhatelwe, nezisezakubhatalwa zonyango kunye nezasesibhedlele;
Indleko zemali elahlekileyo, nekuqikelelwa ukuba izakulahleka ngenxa yengozi
Indleko zokujonga lowo bekufanele ukuba uyondliwa/unanekelwa ngumfi;
Umonakalo neentlungu ezibangelwe yingozi, umonakalo nomonzakalo waphakade obangelwe yingozi emzimbeni wexhoba, ukusukela kumnyaka ka 2008 lemali ibhatalwa kwabo bonzakele kakhulu kuphela;
Ndifuna nindincede ndifake isicelo, sidinga ukuba usithumelele ezinkcukacha
https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png 0 0 Julie Rosenbaum https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png Julie Rosenbaum2020-02-01 10:15:422020-02-24 11:53:58Ndifuna ukwazi ngcono ngo RAF kunye namalungelo am emva kokugaxeleka kwingozi yemoto
Ufake ibango usebenzisa igqwetha, kodwa ibango lakho alihambeli ndawo, awufumani mpendulo, kwaye ucinga ukuba awubhatalekanga kakuhle
Amagqwetha anyanzelekile ukuba:
Akumele; akwenzele ibango kangangoko anako;
Akwenzele ibango ngokuthembekileyo;
Enze uphando olupheleleyo, elungiselela isicelo ukuba sibe yimpumelelo,
Akuthumele ukuba uhlolwe ukuze kufunyanwe umonzakalo onobuzaza owenzeke ngenxa yengozi;
Asebenze ngokuzimisela, ukuze ubhataleke kakuhle.
Xa igqwetha lithe lohluleka ukwenza oku, unelungelo lokwenza oku kulandelayo:
ufake isimangalo malunga negqwetha elo kwabasemagunyeni abalawula umbutho wamagqwetha, ukuze kuphandwe, xa uphando lugqibekile igqwetha elo litshutshiswe, okanye,
Umangalele igqwetha, ufune kulo imbuyekezo yemali nkcitho kunye nendleko ezenziwe ligqwetha elo. Amagqwetha anengxowa mali ejongene nemeko eziloluhlobo.
Sizakuqinisekisa ukuba ufumana inkxaso noncedo oludinganyo. Ungaqhagamshelana nathi ngokusithumelela:
https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png 0 0 Julie Rosenbaum https://www.aprav.co.za/wp-content/uploads/2020/09/APRAV-Final-Logo-Web.png Julie Rosenbaum2020-02-01 10:15:032020-02-24 11:53:27Ufake ibango usebenzisa igqwetha, kodwa ibango lakho alihambeli ndawo, awufumani mpendulo, kwaye ucinga ukuba awubhatalekanga kakuhle